भारतीय नायक सञ्जय दत्तको अवस्था गम्भीर ! सबै फ्यानहरुलाई प्रार्थना गरिदिन आग्रह - Mitho Khabar
June 17, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on भारतीय नायक सञ्जय दत्तको अवस्था गम्भीर ! सबै फ्यानहरुलाई प्रार्थना गरिदिन आग्रह
एक गम्भीर बिरामीको सामना गरिरहेका बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्त उपचारका लागि अमेरिका गएको समाचार बाहिर आएको छ । फोक्सोको क्यान्सर तेस्रो चरणमा पुगेको समाचार भारतीय मिडियाहरुमा आएको छ ।
मान्यताले आफ्नो परिवारले सबै कठिनाइहरूको सामना गरिरह्यो भनेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘सञ्जु जहिले लडाकू भएको छ र हाम्रो परिवारले पनि संघर्ष गरिरहेका छ । भगवानले हामीलाई फेरि यो चुनौती दिएर परीक्षण गर्नुभयो । हामीलाई तपाईंको प्रेम र आशीर्वादहरू चाहिन्छ । हामीलाई थाहा छ यस पटक पनि हामी विजेता हुनेछौं ।
जापानको आपतकाल प्रभावकारी हुनेमा पश्चिमी सञ्चार माध्यमले देखाए सन्देह
भारतमा ८० करोड नागरिकलाई तीन महिनासम्म नि:शुल्क खाद्यान्न